RAVALOMANANA Lalao : « 1er tour de vita » – MyDago.com aime Madagascar
Niteraka resabe teo anivon’ny tontolo politika teto amintsika ny mahakasika ny antoko TIM , izay azon-dRaharinaivo ny fahazoan-dalana tany amin’ny minisiteran’ny ati-tany. Ny Filoha Ravalomanana Marc tany Afrika Atsimo dia nilaza fa samy zanak’i Dada jiaby ireo mpomba azy na dia tsy mitovy hevitra aza.Isan’ny izany ve Raharinaivo ? Araka ny fantatra aloha dia efa nifampiresaka tamin’ny lehiben’ny delegasiona Rakotoarivelo Mamy Andriamatoa Ratefinanahary Emile izay sekretera jeneralin’ny TIM Raharinaivo ary nanambara fa tsy manaiky ny hanambarana ny TIM Raharinaivo.Araka ny siosion-dresaka dia mety handrotsaka an-dRaharinaivo ho filoham-pirenena ny antoko Tim Raharinaivo mba hampizarazana ny vaton’ny mpomba an-dRavalomanana .
Izay mahazo tso-drano ihany
Tena zava-dehibe ny handresy amin’ny fihodinanana voalohany dia izay mahazo ny tso-dranon’ny Filoha Ravalomanana Marc amin’io fifdianana io , mazava ho azy fa Ramatoa Lalao Ravalomanana izany. Tsy ny antoko politika na ny firehana hananana no hahombiazana amin’io fifidianana ho avy io fa fanohanan’i Dada sy ny vahoaka ny kandidàny.
Isany paikady hizarazarana ny vaton’ny mpifidy ny fanaparitahana ny ho kandidà maro. Io no tetika ataon-dRajoelina. Harotsany daholo ireo mpomba azy teo aloha io ilay politikan’ny renimalala hoe : zarazarao hanjakana. Ny aty amin’ny Ankolafy Ravalomanana nefa dia mifanohitra amin’izay. Tokana ny kandidàny dia Ramantoa Lalao Ravalomanana. Manana herijika handrombaka ny fandresena amin’ny fihodinana voalohany izy. Raha ny eto Antananarivo manokana dia efa leon-dRajoelina ny vahoaka.Ny any amin’ny faritra manerana ny Nosy dia tsy mahalala izany Rajoelina izany fa I Dada sy ny asa tsara nataony teo hatrizay ihany no mby an-tsainy. Ary io no tombon-dahiny ho an-dRamatoa Lalao Ravalomanana. Efa hitan’ny vahoaka Malagasy ny fahombiazany eo amin’ny fitantanana teo amin’ny fianakaviana Ravalomanana. Na hihemotra na tsia ny fifidianana dia efa azo antoka fa hahazo ny fandresena ny “Zanak’I Dada”
Vita alina i VITAL …
21 pensées sur “RAVALOMANANA Lalao : « 1er tour de vita »”
20 avril 2013 à 13 h 10 min
Efa miketrika sy mangotrangotraka izao ny atidohan’i vaza hoe ho lasa minisitra an. Izay moa no tena antondohan’izy sy Lala R any Lyon. Resaka toerana. Tadidiko tsara ilay hoe: mety azo omena toerana anie ianao avy eo raha manaraka tsara ny hevitray é. Vao naheno izay aho dia nataoko fady ireo.
Mbola filoha aloha izao no edivana fa aiza azy ianareo izany e??
jereo aloha ity hagegen’i vakitampona???heveriny fa ilay SAMBO mba
nizėstėny niaraka t@ TGV angaha ity TIM koa hamikirana mafy ery izato izy?efa MIKAPOKAPOKA,
io izany no vidin’ilay bizò bizò-an’izy sy Mangidy??io no takalony, sady vao maika moa tsy izy no
notondroin’i dada fa i Neny?zarako aza maratra?raha mba SANATRIA indray moa ka mba hanohanany
an’i dada maninona? fa saingy tetika HANGORONANA ny VATONY fotsiny.Tsy manakambo anie e!!efa
lany henatra , efa jamban’ilay fitiavana « V2 » e!!
RENDRIKA SAHADY ANGAHA ILAY SAMBONAREO SY DOMELINA raharinaivo ô??ianao koa aza
ity toa nilaozan’ilay Sambo nandalo sa tena rendrika mihintsy???MAHONENA!lehilahy lehibe lany henatra!!
NA DIA NY NANAOVANAO AN’i DADA FOTSINY AZA DIA SAHINAO VE NY HANGALATRA IO ANARANA
TSY ANAO AKORY SADY TSY AHASOLO NY TOERAN’i DADA AKORY IZAY RAMASA-BOMANGA LAHY TSY
MISY VALĖRANY ! MISY HAFA INONA NAREO SY DOMELINA???POV harinaivo!!miakpokapoak !!
Mazava izany izao fa tsy tokony @ anaran’ny TIM no hitondrana ny fampielezan-kevitra.
marihiko eto dieny mialaoha koa anefa fa ny mety ahatafitohina ny zanak’i Dada ny hoe : » premier de vita » dia tsy manao na inona na inona fa mantena izany fotsiny. Tandremo fa izay no fandrikalehibe indrindra. Ny »premier tour dia vita » dia mila ny tsirairay hanarama-so ny fifidianana, handatsa-bato, hifanome vaovao, ary indrindra hanomana tsara ity fifidianana na hihemotra na tsia ity.
I Raharinaivo aloha hatr@ izao dia tsy mba nokitihan’ny mpitarika ny Ankolafy mihitsy nefa izy dia tsy sasatry ny mamingana foana. Tokony ahitsy izany. Efa maro koa ireo mpanaraka an’i Raharinaivo sy i Yves aimes no niverina fa amiko kosa ireo mpitarika ny GMMR sy ny TIM Raharinaivo dia tsy ilaina intsony mihitsy fa dia efa foza ary tokony hampiarina amiony izay hampiarina ny foza.
Aoka re;Ny mahery tsy maody hono enge ka tsy ela velona e;Aoka Jehova irery ihany no hirehareha ntsika
Andriamanitra ny fandaharana rehetra ny fandaminana;izy no handrava ny hosoka ny lainga rehetra.Ary hatoky isika fa izy no tompony teny farany
1er tour ? ….. 1/4 de tour dia VITA hoe !
Ary i Tsiory io mba tena milaza inona éto ? Fa Toa resaka Andriamanitra foana. Mba misy fitiavan tanindrazana ve ao sa inona ? Raha hiresaka baiboly sy Andriamanitra ianao dia handao hanokatra Loha- hevitra manokana mihitsy, fa raha manana ny djihadiste sy ny extrémiste ny silamo dia ny tahakanareo ny an’ny kristianina, izay tena be rehareha, sy milaza manana ny marina irery fa ny hafa dia »devoly » daholo. Mba efa no eritreretinao ve hoe repoblika no hatsangana ? ary demokrasia no himasoana? Marobe anie ny Malagasy manohana ny filoha Ravalomanana fa tsy voatery ho kristianina daholo ireny. Tsy hoe kristianina akory ianao dia ratsy ny tsy kristianina , raha mba misy fanajana ny hafa any aminao dia mba hajao ny tsy maha kristianina ny hafa ary aoka ho raharahanao manokana ny finoana, fa aza hampidirana @ resaka politika sy éto @ toerana hiombonana. Mino aho fa raha Andriamanitra marina no irinao dia ahay hanaja ny hafa sy hanaja teny tsy hanonona foana ny anaran’Andriamanitra ianao, fa tsy izay manao hoe tompoko tompoko akory no hiditra @ fanjakan’Andriamanitra.
Misaotra mialoha @ ezaka.
@lazalazao,avelao re tsiory hilaza izay maharesy lahatra azy fa tsy misy maharatsy an’izany a!mila an’ireny hafatrafatra rehetra ataontsika ireny ny tolona tohizantsika!tsy aleonao ve mamaky an’ireny hafatra indraim bava ireny toy izay ilay lavareny be tsy hay hoe ahoana?Momba an’ireo efa nanaraka an_dry mémé sy Raharinaivo niverina indray kosa dia tsy azo omena andraikitra be ireo ,fa aleo aloha hianatra handinika tsara,fa sao manao taitaitra be eo dia tsy mijoro tsara ara poto kevitra akory(ohatran’ny akofa entin drivotra )Farany ,ilay teninao hoe ataovy mazava tsara fa tsy an’iDada intsony ny tim,ka izay mbola zanak’i dada dia ao am plate forme mouvance Ravalomanana zao,fa tsy any am tim intsony!
Tonga dia nahazo micro ireo , raha tsy izany dada avy dia nandray fepetra
haingana dia ireo mody mifitsapitsaka ireo daholo, efa noentiny saika hanao propagande
tany @ sisiny rehetra tany fa nalaky niala haingana.Tsy misy manaiky ireo eo raha tsy efa hita MIVAINGANA
izay ezaka hataony, sady atao inona koa anefa ireny e?? manaratsy ny tolona fotsiny f ny ao aza mbol tsy voalamina.
20 avril 2013 à 19 h 24 min
Fahadisoana ny mbola miaraka amin’izay hita fa naningana, namingana sy namadika !
Efa ho lava eny ilay fivavahana, araka ny voalazako eo ambony, tsy kristianina daholo ny olona ary tsy tokony hafangaro ny politika sy ny fivavahana. Tsy hitako izay mahasamy hafa ny fanatisme chrétien sy ny fanatisme musulman. Samy manafangaro ny resaka daholo. AMALGAME SYSTÉMATIQUE . Takona ilay maha Malagasy fa Toa lasa Hoy hoe izay tsy kristianina dia tsy izy.
Efa im-betsaka ny tenako no nahatsikaritra ny resaka fivavahana entin’i Tsiory ato ! Saika nanisy resaka ihany aho fa efa nandroso an’ilay izy i LAZALAZAO dia tsy nihiditra intsony aho !
Izao ê ! Tsara ny mivavaka hoy aho, fa tsy tokony Fivavahana no entina miady indrindra eo amin’ny « sehatra politika », satria hita ny vokany izao !
Miala tsiny amin’Andriamatoa Filoha ny tenako !
Hoy ilay olona iray izay raha niresaka momban’ilay hevitr’i Karl Marx izy, ilay hoe :
La religion est l’opium du peuple ;…. » Comme la drogue, la religion est donc une illusion, mais aussi une RESIGNATION » ! Ary io farany io no hitako « mahazo an’i Tsiory » sy ny vahoaka malagasy !
21 avril 2013 à 0 h 30 min
Eny marina fa izay no lazain’ny tany rehetra erantany fa tsy tokony hiaraka ny fivavahana sy ny politika. Hanipaka kely ny teninareo sasantsasany eto aho anefa.
Asa raha tena tsy mahalala nareo na tsy te hahalala fotsiny izao fa ny tany Aziatika, Afrikanina, Amerika Latina dia fanjakana miaraka foana amin’ny fivavahana. Ary raha vao mihisaka amin’ny fivavahana ireo dia tsy tafa foana ny dia. Ireo anefa ny tany be olona indrindra erantany. Izany hoe ataony kilalao fakana vato ny fivavahana. Dia ny mpivavaka indray manararaotra maka position matanjaka. Lasa inty sy nday ilay izy ka tsy afa-misaraka intsony.
Ny tsy tiako kosa anefa amintsika malagasy dia asian’ny sasany toriteny foana ny com rehetra. Tsy misy olona na 1 aza tonga eto amin’ny furom handeha hiatriak fivavahana na toriteny fa arakin’ny voalazan’ny namana etsy ambony dia asiana sujet manokana momba an’io fivavahana io dia izay te hitafa any dia mitafa any fa tsy mandagina eto amin’ny resaka politika.
Ceci dit NENY ihany ny antsika rehetra.
21 avril 2013 à 8 h 07 min
Marina izany ry Lazalazaoa; Kaneefa todio ny 4 taona lasa;Moa ve isika tsy manana ny marina,? Kanefa nankaiza?Efa nampetraka teo ampela tana Andriamanitra ange e:
21 avril 2013 à 8 h 15 min
Ny ahy aloha ilay fizahozahoana tsy tiakoe;;Ny olona koa miady e ;Mitady vahaolana koa ny foza Ka izany no mahatonga ahy miteny aleo mivavaka ihany mba handresy
1er tour dia vita Rajoelina
1er tour dia vita tsy velona
1er tour dia vita voatelina
1er tour dia lasa dra-L(comme Lalao)
Vaha olana inona no tadiavin’ny foza izany ry Tsiory ? Ary taiza ?
Mba omeo sopapa izahay fa tsy nahitan’izany atramin’izao !
Izao fotsiny ê ! Il ne faut pas s’évertuer à mélanger la réalité (politique) avec la mystique ou le mysticisme (religion)! Deux choses qui sont vraiment antinomiques !
Ne pas vouloir les dissocier, c’est induire le peuple en erreur !
Enga anie!!!nefa tandremo fa na ny valala aza hono tsy azo raha tsy handrin’ilika,
valala tsy an-tanana koa hono tsy azo atolo-jaza,koa alahoery daholo hiady ho @’ilay fahafahana
ny tanindrazana eeeeeee
..valala manidina koa tsy azo asiana sira .
ISIKA IHANY IO RATSIMILAO a!!isika ihany no ahatafa na TSIA IO
1er tour dia vita io.
« MITADY HIRIKA FOANA » angamba no tiany tenenina eto lesy a!
Ny ahy aloha dia drafitra maty paika no hatao miaraka@fivavahana ihany;No ilay miteny hoe 1 tour dia vita;Io fisehosehoana io no tsy zakan’ olona;Ny fidingin’ ny rambony no tsy laitra ange hoy Taolo fa tsy ny hena laniny e:.Ka aoka ree;;Ny vahoaka madinika ange no victime e;
Précédent Article précédent : Vot : Manohana an-dRamatoa Lalao Ravalomanana
Suivant Article suivant : RAKOTOARIVELO MAMY : NY TAJONTSIKA DIA 1ER TOUR DIA VITA